Home » My Dear Diary » ချောင်းသာ ကမ်းခြေ အမှတ်တရ
ဆူး စိတ်ကူး ချောင်းသာ ကမ်းခြေ အမှတ်တရ
ပို့စ် တစ်ခုလုံး ပျှော်ရွှင် မြူးထူး တက်ကြွနေတဲ့ လေသံတွေနဲ့ ပြည့်နေရဲ့
အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ရေးထားတာပါ..
အခု ပိုစ်လေး ကို အားပေးတဲ့ အတွက်ကော လက်ဖွဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ အတွက်ပါ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။
အချိုရည်တွေ ရွဲပြီး ချိုရဲနေအောင် တမင် ရေးထားတာပါ.. ပျော်ရွင်ခြင်း အမှတ်တရ အဖြစ်ပေါ့။
အပျော်တွေကို ဝေမျှခံစားပြီး ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခေါက် ကမ်းခြေသွားဖြစ်ရင် ဘာစားပြီးပြီး ညနေဘက်ကို ဂျယ်လမက်လေးသော်လည်းကောင်း၊ ကရင်အော့(ဖ) မက်ဂနီစီယမ်လေးသော်လည်းကောင်း ဝါးဝါးပေးပါတဲ့။ :harr:
အဲ့လိုမျိုး တခါမှ နေမကောင်းတာ အစာ မကြေတာ ဖြစ်ခဲတယ်.. တခါမှ မဖြစ်ဘူးဘူးလို့ ပြောလို့ ရတယ်။
နိုဝင်ဘာကုန်က သွားခဲ့တဲ့ ခရီးကို တစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိ မျက်စေ့ထဲ စွဲနေသလို မှတ်မိနေတယ် ဆိုတော့ကာ…….
ပျော်ရွှင်နေတာ သိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ဆူးရေ။ :hee:
စိတ်ထဲမှာ စွဲထင်ကျန်ရှိနေမှုကလည်း အတိုင်းအတာ တခု အရ နောင် ၁၀နှစ် အနှစ် ၂၀ ဆိုရင်တော့ အခုလောက် မမှတ်မိနိုင်တော့မှ သေချာပါတယ်။
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် ကြင်စဦးတွေရဲ့အပျော်တွေ ကူးစက်သွားပါတယ်။
အားတော့ အပြည့်ရှိနေလို့ မကျသေးပါ။
အားလုံး ကို အပျော် ကူးစက်သွားအောင်.. ဆူး နဲ့ အတူတူ ခရီး တခု တူတူ ထွက်လိုက်ရတယ် ခံစားရအောင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ရေးထားတာ ဆိုတော့ ရေးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အထ မြောက်တယ် ပြောလို့ ရတာပေါ့နော်..
စာအရေးအသားတွေထဲမှာ အပျော်တွေပါပြီး အသက်0င်လွန်းတော့ ဖတ်သူတောင်
နွယ်ဂနိုင်မြိုင်တော မှာ အပင်ငယ် ကလေးတွေ မပေါများခင် ထပ်ပြီးတော့ မွမ်းကြပါလား.. :D
ချောင်းသာကမ်းခြေ အမှတ်တရ ဆိုတော့
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရတာ ပျင်းတဲ့ အကျင့် ရှိလို့ သိပ်မရိုက်ခဲ့ဘူး။
“ကိုကိုနဲ့ အတူတူ သွားတယ်။ ကိုကိုနဲ့ အတူတူ စားတယ်(ငါးကင် ပုဇွန်ကင်)။ ကိုကိုကနောက်တယ်။ ကိုကိုက ချောင်းသာကို ခဏခဏ ရောက်တယ်။” ဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ် ဆူးရေ။
ချောင်းသာ ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လည်ပတ်စရာ နေရာတွေထဲက တခုပါပဲ။
ရွာတော်ရှင်မ ဆူး ဆိုပြီး ကြားဖူးနေတာလေ။ ရွှေကြည်ရွာထဲရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပို့စ်တင်တာမရှိသလောက်ပဲ
အရင်တုန်းကတော့ စာကို တနေ့ တပုဒ်လောက် ရေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ စာရေးရမှာ ပျင်းတဲ့ စိတ်ကလေး ၀င်လာတာနဲ့ စာမရေးဖြစ်တော့တာပါ။
ပျော်နေတဲ့ စုံတွဲပုံလေးပါ ပါရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားမှာ …
ဟုတ်ပါ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေရော ကြည့်ရမယ်ထင်နေတာ ။
စာထဲမှာ ပျားရည်တွေ လောင်းတာများသွားပြီ ထင်တယ်.. ဟိဟိ.. အားကျတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကင်မရာကလည်း သီးသန့် ပါမသွားဘူး
ချောင်းသာကို လွမ်းသွားပြီ ။
ခါတိုင်းတော့ ပင်လယ်စာ စားရင် အဲ့လို မဖြစ်ဘူးဘူး။
အပျော်တွေ ကူးစက်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ပါပေ့ဗျာ . . . . . . . အားကျသွားပါတယ်ဗျို့  ………….
မကြာခင် နောက် ၁နှစ်ခွဲ လောက် ဆိုရင်တော့ မိသားစု နဲ့ အပျော်ခရီး ထွက်ပြီး လည်ပတ် နိုင်ပြီထင်တယ်နော်..
ဆူး လည်း ပျော်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလင်..ဒီမယား.. တသက်လုံးသယ်သွားကြရမယ့်.. ဘ၀မှတ်တိုင်ခရီးစဉ်လေးပေါ့…
အရှိန်လွန်ပြီး.. ယူအက်စ်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့.. ကြိုပြောနော..
မေ့သွားရင် ပြန်လာဖတ်ပြီး သတိရသွားအောင်လို့ သေချာ ရေးထားတာ.. ဟိဟိ..
အရှိန်လွန်ပြီး ယူအက်စ်တော့ မရောက်နိုင်သေးတာ သေချာတဲ့ အတွက် စိတ်အေး လက်အေး နေလို့ ရပါကြောင်း.. ဟိဟိ..
၀ိုင်းကူပေးချင်လို့.. ဒါမှ ဂျာပွန်မှာ ငလျင် အကြိမ်ရေ နည်းပြီး လူထုတွေ တော်တော် များများ စိတ်ပိုချမ်းသာ လာကြလိမ့်မလားလို့.. တွေးမိတွေးရာပေါ့လေ..
ဆူးရဲ့ စာလေးဖတ်ပြီး အပျော်လေးတွေကူးစက်လာလို့
ကမ်းခြေသွားဘို့ စီစဉ်လိုက်ပြီ…. :hee:
ပင်လယ်ရေ ကလည်း လူ ကို အညောင်းအညာ နဲ့ အကြော အချဉ် ပြေစေတယ်.. တနှစ်တခါတော့ သွားသင့်တယ် ထင်တယ်။ ကမ်းခြေထဲမှာ ငပ္ပလီ တို့ စက်စဲ လို့ ရောက်ဖူးတယ် ချောင်းသာ နဲ့ ငွေဆောင်သာ မရောက်ဖူးတာ..
သဂျီး အလိုတော် အရ တော့ ကလေး တစ်ဒါဇင် တော့ မလိုချင်ပါကြောင်း..
မမဆူးနော် အားကျလာပြီ ဒီကသီလရှင်ဝတ်ဖို့စဉ်းစားထားတာရယ် စိတ်တွေပြောင်းတော့မယ် ဒုက္ခပါဘဲ :harr:
အမလေး.. မမဗုံ.. ဆူး ကို သာသနာဖျက် ဘွ တော့ ရောက်အောင် မသွတ်သွင်းပါနဲ့နော်..
ဆူးရဲ့ ချောင်းသာ ဟန်နီမွန်းကို ဖတ်ပြီး
အပျိုကြီး မနို ဒါလင်ကြီး နဲ့ တူတူ သွားရင် တူမလေး တော့ ခေါ်သွားအုန်းနော်.. တူမလေး က စိတ်ကောက်ပြီး ခြေစောင့်နေမှာ စိုးလို့.. :D
ကဗျာတော့ မစပ်တတ်လို့.. ဒီလိုပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်
Big.. big congratulations! to Ko Ko ;)
Congratulation ပါ အစ်မဆူးရေ … ။ ဟန်းနီးမွမ်းရေးထားတာ အသေးစိတ်မို့ မျက်စိထဲတောင်မြင်ယောင်မိတယ် … ပျော်စရာကြီးပဲ … ။
ဆူး ချောင်းသာ သွားတဲ့ ရက်နဲ့ သိပ်မကွာဘူး ထင်တယ် ဖဘ မှာ ပုံတွေ တွေ့လိုက်တယ်။
ငွေဆောင် ကတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားတာ တော်တော် ပင်ပန်းတယ်။ လမ်းကလည်း ကြမ်းတယ်။
ဟန်းနီးမွမ်း ကို အသေးစိတ်ရေးထားလို့ သူငယ်ချင်းက Report နဲ့ တူတယ်လို့တောင် ပြောတယ်..
ဆူး ရဲ့ပိုစ့်လေးကို အပျော်လေးတွေတွေးပြီး ဖတ်လာပြီး အဆုံးနားကျမှ နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ပြန်ရတာ ဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။
တလမ်းလုံး ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် နဲ့ စားခဲ့တာ အပြန်ကျမှ ၀ဖီး မှာ စိုးလို့ ၀ိတ်လျော့လိုက်တာ.. ဟိဟိ..
ရွှေရတု ခရီးထွက်ချင်တာ အလွန်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးလို့ မြင်မိပါတယ်။
ဆူးရေ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း နော်၊
ပိုစ်ကို ဖတ်တဲ့ လူတွေ ပျော်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးထားတာပါ။
ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်က အားကျပြီး သွားချင်တဲ့ လူတွေ အသုံးစရိတ် မှန်းလို့ ရအောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေ နဲ့ ရေးပေးလိုက်တာပါ။
ဒါတောင် ကားလက်မှတ် အသွားအပြန် ၁၅၀၀၀ ပေးရတာနဲ့ ဟိုတယ် ဘိုကင် မချိတ်ပဲ ဒီတိုင်းသွားရင်တောင် ကားသမားတွေက ဟိုတယ် တခုပြီး တခု ရပ်ပေးပြိး အခန်း ရှိမရှိ လိုက်မေးဖို့ ကူညီပေးတယ်။ မကြိုက်ရင် ကားပေါ်ပြန်တက်.. နောက်ဟိုတယ် တခု ရှေ့မှာ ရပ်ပေးတယ်.. သွားစုံစမ်း မကြိုက်ရင် ပြန်တက် ဆိုတဲ့ စနစ်နဲ့ အားလုံး အခန်း ရတဲ့ အထိ စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ စောင့်ပေးသလို အပြန်နေ့မှာလည်း ကားက တည်းတဲ့ ဟိုတည်မှာ နာမည် စာရင်းနဲ့ မှတ်ပြီး လာကြိုပါသေးတယ်။
ပုံကလေးတွေတော့ ထည့်ချင်ပါတယ်.. ခရီးစဉ် တလျှောက်မှ တအိအိ နဲ့ ရွာနေတဲ့ မိုးက ကင်မရာ ထုတ်ရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ သိပ်မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ၂ယောက်တွဲတောင် မရိုက်ခဲ့ဘူး ဘာညာနဲ့ ပွစိ ပွစိ ပြောတော့မှ အပြန်ခရီး ကားပေါ်ရောက်တော့မှ ထိုင်ရင်းနဲ့ ၂ယောက် တွဲလေး ၁ပုံပဲ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကလည်း ထင်သလောက် မလှတော့ အိမ်မှာပဲ ဖွက်ထားလိုက်တော့မယ်နော်။
ဒါ သပ်သပ် ရွာထဲက အပျိုကြီးတွေကို ကလိတာ
ဟာာာာာ.. မောင်ပေ.. ကုန်းဆင်း မှာ တွန်းမချ နဲ့နော်.. ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် အားကျတယ် ဆိုလည်း အားကျတယ်ပေါ့အေ.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့
မဆူးရဲ့ စာတွေ မဖတ်ရတာကြာလှပြီ ။
အခု ပိုစ်လေး ကို ၂ခု နဲ့ ၃ခု ခွဲပြီး ရေးမယ်ဆို ရေးတင်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှတ်တရ အဖြစ်သီးသန့် ရေးထားတာမို့.. အပိုင်းပိုင်းခွဲပြီး ရေးတင်နေရင် နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဟာကို ပြန်ဖတ်ချင်လို့ လာပြန်ရှာရင် တခုတည်းနဲ့ မပြီးပဲ အပိုင်းပိုင်း ဖွင့်ပြီး ရှာနေရမှာ စိုးလို့.. အဟိ..
ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အခန့် မသင့်ခဲ့လို့ ကောင်းကောင်း မရိုက်ခဲ့ရဘူး။
ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်စုံနိုင်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်ပါ့မယ်။
Congratulations! သူများရဲ့ပျော်စရာ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှထားတဲ့ပို့မှာ ဘယ်မနာလို သ၀န်တို ချဉ်တတ်သူများက လာအနှုတ်တွေပေးထားလဲမသိဘူး… တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေ.. ဆူးရေ.. ပျော်ရွှင်စရာနေ့တွေ သက်ဆုံးတိုင်ရပါစေနော်.. သားကောင်းသမီးမွန်လေးတွေထွန်းကားပါစေ
နီရင်နီတယ်မှတ် တိုက်ပွဲရှိမှအောင်ပွဲ ရှိတယ်ရဲဘော် အဲလေ ဒကာမလေး. Using ianimal